Ibsa Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi IA HD ABO Jaal Araarsoo Biqilaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Gabaabaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa fi IA HD ABO Jaal Araarsoo Biqilaa
(BBC Afaan Oromoo) — Hayyuu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa torban tokkoo oliif manaa akka hin baane erga taasifamanii booda Jimaata, Adoolessa 31, 2020 waajjira galuun hojii eegaluu BBC’tti himaniiru.
‘Nageenya kee tiksuufi’ jedhamuun manaa akka hin bane taasifamuu kan himan Obbo Daawud, sararri bilbila moobayila isaaniis tajaajilaan ala taasifamee akka jiru himan.
“Poolisoonni federaalaa dhufanii nageenya keef jecha manaa akka hin bane. Naannoo kanas ni tiksina quba qabaadhu naan jedhan. Uffata isaanii irraa akkan hubadhetti poolisii federaalaati. Egaa anis nageenya tiksu jedheeman hubadhe.”
Adoolessa 24 irraa eegalee ammoo namni mooraa isaanii keessaa bahuu fi galuu akka hin dandeenye dhorkamuu himan.
“Nyaata bituuf konkolaachisaa tokkoof qofa akka eeyyaman natti himan. Gaafuma sana dabaluun tajaajila bilbila harkaa koo narratti cufan.”
“Qaamni nageenya kee eegna jedheefi sarara bilbila harkaa koo akka cufamu godhe quba wal qabaachuuf dhiisuu isaanii waanan bare hin qabu” jedhu.
“Nageenya kee tiksaa, eeggannoo cimaa gochaa manaa baate waajjira deemuun hojjechuu dandeessa” jedhamanii hojiitti akka deebi’an dubbatu.
‘Naannoo mana jireenyaa Daawud Ibsaa humni hidhate buufatee jira’
‘Oduun fonqolchatu hayyu duree irratti gaggeeffame jedhu olola’ – Araarsoo Biqilaa
Amma dura sodaa ykn yaaddoo nageenyaa qabaachuu gaafatamanii, “sodaan hin jiru jechuufis ni ulfaata” jedhan.
“Nageenya kee tiksina, sodaan jira erga jedhanii diduunis gaarii miti. Yoo nan baha jette waan uumamu hin beektu.”
Dhugumatti nageenya tiksuuf dirqama kan qabu mootummaadha kana jedhan namni siyaasaa gameessi kun du’a Haacaaluu booda namni hedduun yaaddoo nageenyaa akka qabu dubbatu.
“Anaaf garuu oduun akkasii haaraa miti, inuma odeeffama ture” jedhu.
Torbee darbee keessaa wayita Obbo Daawud manaa bahuu hin dandeenyeefi qunnamtiin isaaniis adda citee turetti miseensonni gumii sabaa ABO guyyoota lamaaf wal gahii godhatanii turan.
Wal gahiin hayyu duree itti aanaa dhaabichaa Obboo Araarsoo Biqilaan waamame kun miseensotaa fi deeggartoota adhaabichaa hedduu biratti ija shakkiin ilaalame.
Mootummaatu duuba jira, Obbo Daawud hayyu durummaa irraa kaasuufi kanneen jedhan turan. Miidiyalee fi namootni mootummaatti dhiyaatanis kana gabaasaa turan.
“Wan waajjiratti tahe guutummaatti hin beeku” kan jedhan Obbo Daawud, koreen seeraa dhimma dhaabaa irratti qorannoo gaggeessee murtii dabarsu kan kora sabaa irratti filatame dhimmicha qulqulleessaa akka jiru himan.
“Qorannoo gaggeessaa jiru. Murtii xumuraa irra yeroo geenyu kan beekamu taha. Hanga sanatti waa’ee kanaa yaaduu dhiisee miseensi hunduu hojii isaa hojjechuu qaba. Kun seera dhaabichaa waan taheef kana isaanumaaf dhiisna.”
“Ani quba hin qabu. Maaltu akka gaggeeffame dhugaasaa hin beeku.”
“Miidiyaaleen tokko tokko waan xiqqoo argatanii waan baay’ee nurratti odeessu. Kun waan haaraa miti. Olola ABO iirrati duulaa jiranidha.”
ABO erga chaartaraa bahee wagga 30 tahe kan jedhan Obbo Daawud waggoota kana keessa, mootummaa fi humnooti hedduun ABO’n akka dhaabaatti akka hin jiraanneef hedduu yaalaniiru jedhu.
“Humna baay’eetu yaale. Namni wareegamuu mala. Hedduun wareegamaniirus. Waggaa lamaan asiyyuu akkasuma baay’ee yaalamaa ture. Garuu dhaabichi jira.”
“Dhaaba kana [ABO] jechuun tulluu guddaa jechuudha Oromoodhaaf. Oromoon dhaaba kana ijaaree asiin geessiseera. Tulluu kana irra moccoranii madeessuun ni jiraata.”
“Adda Bilisummaa Oromoo jechuun kan hogganootaa miti, kan Daawud miti. Namni keessaa harca’uu, wal harcaasuun ni jiraata; kunimmoo adeemsa qabsooti,” jedhan.
“Bara Chaartaraa sana karaa dhihaa qofa hoggana keenya nama 10 oltu wareegame. Karaa Bahaas akkasuma. Garuu dhaabichi namoota hafaniin as gahe. Ammas namni hidhamuun miidhaa guddaa qaba. Har’a dhaabichi ammoo namoota muuxannoo fi beekumsa hedduu horatan hedduu qaba. Isaaniin itti fufa.
ABO’n erga qabsoo karaa nagaaf jecha biyyatti deebi’ee miseensonni fi hogganoonni isaa hedduun jalaa hidhamuu komataa ture.
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuunis hogganoonni olaanoo hedduun jalaa hidhamaniiru.
“Galmee keenya irraa kan qabnu erga Haacaaluun ajjeefameen as hoggansa bakka adda addaa namoota 103 oltu hidhaa jira” jedhan.
Hogganoonni kunneen hidhamuun miidhaa guddaadha jedhu Obbo Daawud.
“Muuxannoo guddaa kan qaban, kan uummata kanaaf bu’aa buusan, beekumsa kuufatanii kan jirantu hidhamee jira.”
“Ajjeechaa naannoo Amaaraa hordofees Oromiyaa keessaa miseensotaa fi hogganoota keenya funaananii hidhaa turan. Ajjechaa Haacaaluun dura ammoo namootni akka Abdii Raggaasaa, Amaan Filee, Kaayyoo Fufaa namoota baay’eetu hidhaa jira.”
KFO fi ABO’n aangoon mootummaa dheerachuu morman, ABIN deeggare
Namootni hidhaa jiran kunneen akka gadhiifamaniif poolisi, boordii filannoo, fi waajjira abbaa alangaa akkasumas dhaabbata mirga namoomaaf falmutti, waajjira ministira muummees iyyata galfachuus himu.
Mootummaan namoonni hidhaman kunneen sababa miseensa paartii ta’aniif osoo hin taane yakkaan waan shakkamaniif hidhaman jechuun ibsaa ture.
Yeroo hedduu mootummaan ABO’n ammallee loltoota didanii bosonatti hafaniin hariiroo akka qabu himuun rakkoo nageenyaa uumamuuf dhaabicha komata.
“Kun olola waltajjii irraa qofadha, yoo ragaa qabaatan [dhaabicha] seera irratti nu haa gaafatan” jedhu.
“ABO’n deeggaraa baay’ee qaba jedhanii waan sodaataniif [filannoof] akka hin galmoofneef kanaan dhiibbaa gochaa turan” jedhu.
Nageenyaaf sodaannee hojii dhaabuufi hirriba dhabuun nu bira hin jiru jedhu Obbo Daawud.
“Biyya kana keessa erga jiraannee wabii nageenyaa nuti eeggannuu fi abdannu hin jiru. Ana dabalatee gaafa hidhaan dhufe hidhamuu gaafa ajjeechaas fudhachuuf qophiidha.”
ABO’n erga Chaartara keessaa bara 1992 bahee yeroo jalqabaaf filannoo Itoophiyaa irratti qabsoo karaa nagaan hirmaachuuf hojjetaa jira.